भाजापा नेताले आफ्नै कार्यकर्तासँग गरे तेस्रो विवाह
२०७६ असार ८ आइतबार, काठमाडौं । भारतको गुजरातमा एक ४५ वर्षीय नेताले आफ्नै कार्यकर्तासँग तेस्रो विवाह गरेका छन् । गुजरातका भारतीय जनता पार्टीका नेता शंकरभाई अमलियार दाहोदले जिल्ला इकाइ मोर्चाकी उपाध्यक्षसँग विवाह गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
आफ्नै मन्त्रीको भाषण सुनेर हाँसे मोदी, मुस्कुराइरहे राहुल र सोनिया
२०७६ असार ६ शुक्रबार, काठमाडौं । भारतको १७ औं लोकसभाको तेस्रो दिन राजस्थानको कोटाबाट भाजपाको सांसद ओम बिडलालाई लोकसभाको निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत गरिएको थियो । उनलाई मनोनीत गरिएसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य सांसदहरुले पनि उनको प्रशंसा गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
रिहापछि फेरी कराउन थाले भूकम्पको आतंक फैलाउने ‘ज्योतिषी’
२०७६ असार २ सोमबार, काठमाडौँ । केही युट्युब अनलाइन टेलिभिजनहरुमा अन्तर्वार्ता दिएर दर्शकहरुमा आतंक फैलाउने ‘ज्योतिषी’ अर्जुन थापा क्षेत्री फेरी कराउन थालेका छन् । ... बाँकी अंश»
आमालाई दोस्रो विवाहको शुभकामना दिने छोरा चर्चामा, के थियो शुभकामना ?
२०७६ जेठ ३० बिहिबार, काठमाडौं । आमा छोराको सम्बन्ध अनमोल छ । यसको वर्णन शायद शब्दमा गर्नको लागि निकै कठिन छ । ... बाँकी अंश»
४० हजार वर्ष पुरानो ब्वासोको टाउको जस्ताको त्यस्तै
२०७६ जेठ ३० बिहिबार, काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले ४० हजार वर्ष पुरानो एउटा ब्वासोको टाउको अहिले जस्ताको त्यस्तै भेटेका छन् । ... बाँकी अंश»
अढाइ करोडका बिएमडब्लु मालिकले पेट्रोल हाल्न चोरे कुखुरा
२०७६ जेठ २९ बुधबार, काठमाडौं । मानिसका शौखहरु पनि अजिबका छन् । ती शौख पुरा गर्न मानिसले जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । यस्तै एक मामिला सामुन्ने आएको छ । जहाँ उनले आफ्नो शौख पुरा गर्न के सम्म गरे त्यसको खुलासा भएको छ । उनको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भैरहेको छ । ... बाँकी अंश»
१०० एकड जग्गामा फैलिएको प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर
२०७६ जेठ २९ बुधबार, भारतको दिल्लीस्थित धार्मिक पर्यटकीय प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर । ... बाँकी अंश»
क्रेनले उठाएर एकैदिन १०० वटासम्म कार चोरी, पक्राउ गर्दा प्रहरी झनै आश्चर्यचकित
२०७६ जेठ २९ बुधबार, नयाँ दिल्ली । दिल्लीको सडकमा क्रेन लिएर घुमेका कार चोरहरुको विगविगी मच्चिइरहेको छ । खबर पढेर धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । ... बाँकी अंश»
बिजय माल्यासँग दर्शकले यसरी मागे पैसा
२०७६ जेठ २८ मंगलबार, काठमाडौं । आइतबार भारतले विश्वकपमा अष्ट्रेलियालाई हरायो । सो खेल हेर्नको लागि भारतीय व्यपारी विजय माल्या पनि पुगेका थिए । बेलायतमा बस्दै आएका उनि छोरा सिद्धार्थ माल्यासँग पुगेका थिए। ... बाँकी अंश»
रातारात चोरले चोरे ५६ टनको सिंगो पुल
२०७६ जेठ २७ सोमबार, काठमाडौं । घर वा पसलमा चोरीको घटना सुनिएकै हो तर चोरले सिंगो पुल नै चरेर लगे भन्ने घटना चाहि अनौठो लाग्ला । यस्तै घटना रूसको मुरमेन्स्कमा घटेको छ, जसको तस्वीर सोशल मीडियामा भइरल भएको छ । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणको अर्को पक्ष
२०७६ जेठ २७ सोमबार, ‘लण्डन, बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले शुक्रबार (२४ जेठ) सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री मेले जुन ७ मा कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिने यसअघि नै बताएकी थिइन् । ... बाँकी अंश»
शौचालय सम्झिएर महिलाले खोलिन विमानको आकस्मिक ढोका
२०७६ जेठ २७ सोमबार, काठमाडौं । इङल्याण्डको मेनचेस्टर एयरपोर्टमा एक अनौठो घटना भएको छ । विमानमा रहेकी एक महिलाले शौचालयको ढोका सम्झिएर विमानको इमर्जेन्सी गेट खोलेकी छन् । ... बाँकी अंश»
मन्जन राखेर युट्युब स्टारले खुवाए बिस्कुट, अदालतले सुनायो डेढ वर्षको जेल सजाय
२०७६ जेठ २४ शुक्रबार, काठमाडौं । स्पेनको अदालतले युट्युब स्टार कंघुआ रेनलाई डेढ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । उनले घरबार नभएका गरीब व्यक्तिलाई दुख दिएको भन्दै उक्त सजाय सुनाइएको हो । ... बाँकी अंश»
मान्छेकै मासु खाने इदि अमिनको शासन कस्तो थियो ?
२०७६ जेठ २४ शुक्रबार, काठमाडौं । इतिहासकै क्रुर शासक इदि अमिनले युगाण्डामा चलाएको क्रुर शासन र नरसंहार बिर्सनलायक छ । उनले सत्ता हत्याएर राष्ट्रपति भएदेखि गरेका क्रुर कार्यको चर्चा मात्र गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । ... बाँकी अंश»
विवाहको लागि युवकको आमरण अनशन, प्ले कार्ड बोक्दै भने - मेरो आठ वर्ष फिर्ता गर
२०७६ जेठ २३ बिहिबार, काठमाडौं । विभिन्न माग पूरा गराउन नेता तथा अन्य व्यक्तिले धर्ना बसेको सुन्दै आएको कुरा हो । तर, एक युवा विवाहको लागि पनि धर्नामा बसेका छन् । डीएनए इन्डिया डटकमका अनुसार पश्चिम बंगालका अनन्ता बर्मन नाम गरेका युवकले धर्ना दिएका प्रेमिकालाई विवाहको लागि राजी गराएका छन् । ... बाँकी अंश»
यस्तो पनि थेरापी !
२०७६ जेठ २२ बुधबार, चीन । मंगलबार चीनको उत्तरपूर्वी लियाओनिङ प्रान्तस्थित अन्शनमा रहेको टाङगान्जी अस्पतालमा माटो मुनि सुतेर थर्मल खनिज मड–बाथ फिजियो थेरापी लिँदै गरेका रुसी बिरामीहरु । ... बाँकी अंश»
साउदी राजकुमार बनेर ३० वर्षसम्म ठगी, सुँगुरको मासुले खुल्यो पोल
२०७६ जेठ २० सोमबार, काठमाडौं । अमेरिकामा करीब ३० वर्षसम्म साउदी राजकुमार बनेर करोडौं ठग्ने ठगको पर्दाफास भएको छ । फ्लोरिडाको अदालतले एन्थोनी गिग्नेक नाम गरेका यी व्यक्तिलाई धोकाधडीको मामिलामा १८ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो । ... बाँकी अंश»
ट्रकले पेलेपछि राजारामले श्रीमतीलाई गरे भिडियो कल
२०७६ जेठ १९ आइतबार, भारत। बेगूसरायको नेशनल हाईवे-२८ मा एयरफोन लगाएर मोटरसाइकल चलाइरहेका युवकको ट्रकसँग ठोक्किएपछि मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
अमिताभसँग रिसाइन् जया बच्चन
२०७६ जेठ १७ शुक्रबार, काठमाडौं । भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनको 'लावारिस' रिलिज भएको ३८ वर्ष पूरा भएको छ । बक्स अफिसमा यो फिल्म २२ मे १९८१ मा रिलिज भएको थियो । यसलाई मानिसहरुले निकै रुचाएका थिए । ... बाँकी अंश»
भारतको संसद् बारे रोचक तथ्य, जहाँ २० रुपैयाँमा पाइन्छ खाना
२०७६ जेठ १६ बिहिबार, काठमाडौं । भारतमा हालसालै लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको एनडीए गठबन्धनले ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ । यो जितसँगै भाजपाले आफ्नो ४० वर्ष पुरानो रेकर्ड पनि तोडेको छ । ... बाँकी अंश»